Iindaba -I-Covid-19 izise ifuthe elikhulu kunye novavanyo kumzi mveliso weRhwebo
I-Covid-19 izise ifuthe elikhulu kunye novavanyo kwiRhwebo loRhwebo
Kwisiqingatha sokuqala se-2020, ukuqhambuka ngesiquphe kwe-coVID-19 kubeka ishishini leentengiso kwihlabathi liphela, kubandakanya nomzi mveliso wempahla, kwimpembelelo novavanyo olukhulu. Phantsi kobunkokheli obomeleleyo be-CPC Central Committee, imeko yokuthintela ubhubhane kunye nolawulo e-China iqhubekile nokuphucuka, imveliso kunye nolawulo lobomi lubuyisiwe ngesantya esikhawulezayo, imakethi yabathengi iqhubekile nokufumana ngokuthe chu, kwaye abathengi ngokuthe ngcembe kwandise ukuzimisela kwabo kunye nokuzithemba kwinkcitho. Ukusukela ngoJanuwari ukuya kuJuni ngo-2020, ukuthengisa kweTshayina kwempahla yabathengi kufikelele kwi-17.23 yezigidigidi ze-yuan, kwehla nge-11.4% ngonyaka ngonyaka kunye neepesenti ze-7.6 ngamanqaku angaphantsi kunakwikota yokuqala. Phakathi kwabo, ukuthengiswa kwempahla kuye kwanda ngokuthe chu. NgoJuni, ukuthengiswa kweentengiso kubuyiselwe kwi-3 trillion yuan kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo. Ukubuyiselwa kwimeko yesiqhelo kukhawulezisiwe, imarike yabathengi iqhubekile nokuthatha ngokuzinzileyo, kwaye abathengi bazimisele ngakumbi kwaye bazithemba ukuchitha. Ukusukela ngoJanuwari ukuya kuJuni ngo-2020, ukuthengisa kweTshayina kwempahla yabathengi kufikelele kwi-17.23 yezigidigidi ze-yuan, kwehla nge-11.4% ngonyaka ngonyaka kunye neepesenti ze-7.6 ngamanqaku angaphantsi kunakwikota yokuqala. Phakathi kwabo, ukuthengiswa kwempahla kuye kwanda ngokuthe chu. NgoJuni, ukuthengiswa kweentengiso kubuyiselwe kwi-3 trillion yuan kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo.
Ngenxa yemeko yangoku enzima, iimpahla zisabalulekile kubomi bemihla ngemihla. Sisoloko sinyanzelisa ekuphuhliseni iimpahla zemidlalo zangaphandle. Ngokungafaniyo nempahla yabantu abadala, abathengi baya kuthathela ingqalelo izinto ezinje ngentuthuzelo, umgangatho, uphawu, kunye nokuzalisa xa bethenga iimpahla zabantwana, hayi nje "ezihle". Kungenxa yokuba abantwana bakwisigaba sokukhula kwaye baneemfuno eziphezulu zempahla esondeleyo, ekufuneka iqinisekise intuthuzelo ngaphandle kokonakalisa impilo。
Inkampani yethu yinkampani yorhwebo lwangaphandle enabantu abadala abanxiba impahla engaqhelekanga kunye nempahla yabantwana njengeemveliso eziphambili, ezingenamanzi kunye namalaphu afanelekileyo okuphefumla, umsebenzi ogqibeleleyo, uyilo lwefashoni. Sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba "akukho nto intle, ingcono kuphela", kwaye uhlala ngoku ukhetho kunye nokuthembela kwimidlalo yangaphandle